uBavuma uthola isitayela sakhe kwisimo ‘esihlukile’ saseNew Zealand
Oshayela amaStandard Bank Proteas, uTemba Bavuma, usethuthukise isitayela sakhe sokudlala ukuze sifanele isimo angasazi saseNew Zealand kwi-series ekhona njengamanje. uBavuma ubonisane nesimo esihamba kancane eDunedin, ebesihlukile kulesi asaziyo se-bounce ne-pace, saseBidvest Wanderers Stadium eGoli.
“Isimo sihlukile kunalesi esisijwayele ekhaya,” esho ekhuluma nezintatheli eBasin Reserve ngoLwesibili. “Ama-wicket ahamba kancane, ayiningi i-bounce, umoya olunye udaba. Ngishintshe isitayela sami ukuze sihambelane nazo zonke lezo zindaba.”
Uthi uBavuma uzothatha ukuzithemba kulo-64 awushaya ngaphansi kwencindezi eDunedin, kodwa angathanda ukushintsha indlela aqala ngayo ukuthi kube imiphumela emkhulu. Uthi ukuqina ngomqondo kuhambelana nokubuyela kwi-form ethembisayo, emuva kwe-series yasekhaya enzima bedlala ne-Sri Lanka.
“Ngiyezwa ukuthi sengiqala ukuthola isigqi uma ngishaya,” esho evuma. “Ngiyajabula ukuthi ngikwazile ukuthola ama-runs, bekuyisikhathi esibi kimina. Ngicabanga ukuthi noma ukuphi ukuzithemba engikutholile lapho kuzomele ngikuthwale.”
“Umuntu akaneliseki ngokuthola u-50 noma u-60, nokho esuke enzela iqembu, ikakhulukazi ukushaya kwi-middle order. Ufuna ukuthola ama-runs amakhulu ukuze ubeke iqembu endaweni enhle. Ngizobambelela kwinkumbulo yaseDunedin futhi ngiqhubeke nokujabulela uhambo.”
“Ngokwengqondo bengilwa,” esho eqgubeka. “Ukwazi ukuthi kuzoba khona isimo sencindezi kanye nokuzama ukuthola indlela yokudlula kuleso simo sencindezi. Akukho ebekunobuchwepheshe, beku ukushintsha ingqondo.”
uDane Piedt ufakiwe kwiqembu lamaTest kwiTest yesithathu.
i-Off-spinner, uDane Piedt, ufakiwe kwiqembu lamaStandard Bank Proteas ngomdlalo weTest wesithathu eHamilton njengomunye ophosa nge-spin. Ngathi uPiedt uzohlangana neqembu ngeTest yesibili ezoqala eWellington ngoLwesine, umaethola i-visa clearance.
Lomdlali oneminyaka engu-27 usedlale imidlalo yamaTest engu-7 edlalela iSouth Africa, eyokugcina banqoba ngama-runs angu-204 bedlala ne-New Zealand eCenturion ngo-August ngonyaka odlulile.
Umdlalo weTest wesithathu uzoqala eSeddon Park eHamilton ngo-March 25.
Imvula ithatha usuku lokugcina eDunedin uElgar noDu Plessis bagcina amaProteas ehamba phambili iMaiden five-wicket haul kaMaharaj igcina amaProteas kumqhudelwano Abaphosela amaProteas kumele babekelekele kwisimo esikhohlisayo AmaProteas ne-New Zealand bami kahle ngosuku lwesibili Usuku obelunzima impela - uElgar Ikhulu lika-Elgar lihola ukubuya kwama-Proteas uRabada noTahir banqobisa iqembu i-series iCSA imemezela amaqembu eNational Contract ku-2017/18 AmaProteas alindele iqembu lonke lidlale indima kumdlalo ozocacisa nge-series Umlingo ka-Guptil ulinganisa i-series eNew Zealand